Nezvedu - Jinjiang Wode Shoe Material Co., Ltd.
TOE PUFF UYE COUNTER
HOT MELT SHEET
Jinjiang Wode Shoe Material Co, Ltd. iri shangu yezvigadzirwa Mugadziri uyo ari kuyedza kuisa zvese kuyedza kupa vese vatengi nezvakanaka zvigadzirwa kugadzirwa, zvigadzirwa kutsvagisa nekusimudzira, kutengesa mushure mebasa.
Isu nehunyanzvi tinogadzira nekutumira kunze: Nonwoven Chemical Sheet, Nonwoven Fiber Insole Board, Stripe Insole Board, Paper uye Cellulose Insole Board, Eva Hot Melt Glue Sheet, Pingpong Hot Melt, Fabric Hot Melt, Velvet hot metl, TPU low termperature Hot Melt sheet, TPU Firimu, Polyester Isinavezwa Jira, Yakasungwa Yakasungwa Mucheka, Insole Bhodhi Kuputira neEVA SHEET, uye Fabric Coatting nesiponji uye eva Zvishandiso uye nezvimwe.
Fekitori yedu ikozvino inovhara nharaunda yemamirimita mazana matatu nemakumi matatu, uye yakavaka bindu-senge musangano unosvika mazana masere emamirimita, uye zvakare ine chivakwa chehofisi uye chivakwa cheimba yekugara dzimba dzemamirimita zviuru zvitatu. Isu takazivisa pamwe nekupinza zvigadzirwa zvemberi zvezvinhu zvedu zvigadzirwa, senge 2 inopisa inonyungudika michina yeEVA yekunamatira, 1TPU firimu muchina, 4 yekumhanyisa tsono yekurova michina, 3chemical jira uye insole bhodhi yekumisikidza mitsara, uye zvakare 3 kupfeka uye michina yemakomputa. Isu tinawo kuyedza kwedu pachedu uye nyowani zvigadzirwa zvigadzirwa zvekuvandudza.
Zvichienderana nekuvandudza kwepamberi uye kugona dhizaini, uye kutora iko kuvandudzwa kwehunhu hwechigadzirwa seyedu gwara, shandisa yazvino manejimendi sisitimu, uye zvakagadziriswa kugadzirwa kuti zvigadzirwa zvedu zvitengese kwazvo pamusoro pese China uye zvakare zvinotumirwa kune vese pasirese, Southeast Asia, Middle East, Middle uye South America, Africa, Europe nedzimwe nyika.
Tichaita zvatinogona kuti tigutse vatengi zvinodiwa. Isu takasimbiswa kwenguva refu uye hushamwari kudyidzana hukama neSoutheast Asia, Middle East, Middle uye South America, Africa, Europe nedzimwe nyika kwemakore mazhinji.
Vanotendeseka vatengi kuti vashanyire uye vagadzire hukama hwebhizinesi nesu
Zvese zvaunoda kuti ugadzire yakanaka webhusaiti
Kuitira kugadzirisa chakakomba kunze kwenyika situa ...
Kurongedza ne roll. mukati polybag muhombodo ne o ...
Mu "kukwira kwemitengo" kwep ...
Kero: Xingjin Maindasitiri Nzvimbo Nanyang Road Shishi Guta reFujian Province China
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Hot Zvigadzirwa - Sitemap - AMP Mobile
Tsono Punch Nonwoven Mucheka, Shangu Insole Chinyorwa Sheet, Pepa Insole Bhodhi NaEva, Insole Bhodhi NaEva, Yakasarudzika Mucheka Laminated Na Eva Foam, Isina kurukwa Mucheka NaEva,